Kedu ka Netflix si abawanye Aka Ndị Ahịa Na-eji Nnukwu data | Martech Zone
Kedu ka Netflix si abawanye Aka Ndị Ahịa Na-eji Nnukwu data
Wednesday, February 28, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ahụmịhe ndị ahịa nke ndị na-edebanye aha ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ma a jigide ha dị ka onye ahịa ma ọ bụrụ na ha nwere ike ibuli elu. Ptghọta ojiji ojiji bụ ụzọ dị mkpa iji mee nke a. Y’oburu na ibu ahia ahia, ahia, ma obu oru - nyocha, nloghachi, nnabata, oku, na itinye ego otutu oge nwere ike inye data di egwu nke puru ikwuputa izu ahia.
Nke a dị oke mkpa maka azụmaahịa. Ọ bụ ezie na omume ndị ahịa gị nwere ike ọ gaghị adaba na ọrụ ndị ahịa gị, ọ nwere ike iwepụ ya kpamkpam. Ọ bụ ezie na ndị na-ere ahịa agaghị enwe ike ịgbanwe ahụmịhe ndị ahịa, ha kwesịrị ịdị na-enyocha ya ma na-enyocha mmetụta ya na ntụgharị, uru dị elu, njigide na ntụgharị.
Netflix na Nnukwu data
Nnukwu data na-enyere Netflix aka ikpebi ihe mmemme ị ga-amasị gị na usoro nkwanye Netflix na-emetụta 80% nke ọdịnaya a na-elele n'elu ikpo okwu N'ịghọta mkpa data a dị, Netflix nyegoro $ 1 nde na 2009 nye ndị otu bịara ihe kacha mma algorithm maka ịkọ otú ndị ahịa ga-achọ ihe nkiri dabere na ọkwa ndị gara aga.
Algọridim na-enyere Netflix aka ịchekwa $ 1 ijeri kwa afọ na uru site na njide ndị ahịa. Ihe omuma a site na FrameYourTV nkọwa otú. FrameYourTV nwere akụrụngwa maka omenala na okpokolo agba aka na TV.
Tags: nnukwu dataOmenala hdtv okpokolo agbaokpokoroenyo igwe onyonyoenyo igwe onyonyoNetflixalgọridim netflixamụma netflixIhe ntaneti onyonyo
Ndị asọmpi gị na-arụ ọrụ na atụmatụ IoT nke ga-eli gị